किसानको आत्मामाथि डोजर चलाउँदै ; स्थानीय तहका महामहिमहरु
विसुन देव सरदारसिराहा,लहान,जेठ २७ बिहीबार। विकासको नाममा किसानलाई कुनै सरसल्लाह बिना गएको बुधबार राती सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रमुखद्वारा धान खेतलाई धान नरोप्ने बनाईदिएको छ । डोजरबाट खेतलाई तहसनहस बनाइ दिइएको छ। सिरहा जिल्ला भरिका स्थानीय तहहरुमा अहिले असाढे विकासको लहरै लहर देखिएको छ। जनता हित बिपरित पनि कामकाज गरेको देखन पाइन्छ । यस्तो घटनाहरु विकास प्रेमी नेताहरूद्वरा असाढेको समयमा प्रष्ट देखिन सकिन्छ । नकुनै मुआब्जा कसैको खेत हर्पेर विकास गर्नु , जनताको यो हितकर नरहेको देखिन्छ । कसैको जग्गा हर्पेर र कुनै सहमति विना विकास गर्नु यस्तो जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट भनेर सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।
विकासका लागि एक जुट हुनुपर्ने देखिन्छ । विकासको नाममा विभिन्न किसिमका नारा लिएर अगाडि बढनु पर्छ। विकास जहिले पनि सकारात्मक अर्थात दिगो विकास हुनुपर्छ । विकासका नाममा जनतालाई चित र कुनै किसिमको दिल मन दुखाउँन हुदैन्न। शिक्षा , स्वास्थ्य , सडक , कालोबजारी , आवासमा जोड दिने स्थानीय सरकार विकासमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने समय देखिन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा केन्द्र सरकार नै उचित रहेको देखिन सकिन्छ । विना कामको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार रहेको चौतर्फी चर्चामा आएको छ। त्यसैले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बहिष्कार गरौँ । अहिले विना कामको करोडौंको रकम हिनामिना गर्ने एउटा साधारण वडा अध्यक्ष , अहिले भ्रष्टाचारी कहलयाउँछ ।
त्यसैले विकासमा जनप्रतिनिधि होइन ; प्राण मुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु पर्छ। लालपुर्जा भएको किसानसँग अनुमति बिना खेतको दसा बिगारेर किसानलाई समस्या बनाईदिएको देखिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो , सबै लाई थाहा छ तर जताबाट जुन तरीकाले भएपनि मार मा पर्ने किसान नै हो । नवराजपुर गाउँपालिका प्रमुख विश्व मोहन यादवलाई पालिका बासीका प्रश्न गर्नु भएको छ।
- लालपुर्जा भएको किसानसँग अनुमति लिनुपर्छ। कि पर्दैन नेपाल को कानुनमा मात्रै होईन बिश्वको हरेक देशमा ब्यक्तिगत जग्गाबाट केही खन्न , उत्खन्न देखि बिकासको काम गर्दा जग्गाधनी बाट अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
- नवराजपुर गॉउपाललिकामा दिउँसो बिकासको काम नगरी रात्री गर्नुको कारण के होला?
नवराजपुर गॉउपाललिकाको रोड सडक कहिलेदेखि धेरै ब्यस्त हुन थालेर गाँउपालिका प्रमुखलाई रात्री बिकास गर्नुपरेछ ? जनताले दिइएको मतबाट जिताइएको प्रतिनिधिहरु बिकासको लागी हो , बिनासको लागि होईन । बिना सहमति काम गर्नुपनि बिनास नै हो । गाँउपालिका अधक्ष्यको काम कर्तव्य हो कि , किसानलाई राहत दिनु हो , के तपाईंले यस्तै किसिमको राहत दिनु हुन्छ किसानलाई ? बिगत १० महिनादेखिको अवधिमा पालिका प्रमुख ३१ करोड बजेट थियो ।
तपाईले के के गर्नु भो किसानको लागि ? हामी किसानको छोरा हो , यस्तो किसिमको अपराध देखेर हामी किन चुप बस्ने ? यस्ता किसिमको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ नै भन्नु होला ? तपाईंको खेतमा यस्ता किसिमले डोजर चलाउँछ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? अषाढ महिनामा किसानले यस्तो खेतमा धान कसरी रोप्छ भन्ने चिन्ता देखिएको छ।
भारत नेपालकाे असल छि ...
लुम्बिनी । नेपाल-भारत महिला मैत्री समाजले आज प्रदेशकाे दुई जिल्लाका बाढ पिडितलाई राहत सामग्री वितरण ...